Nhau - Synthetic zvinhu
Chando chakagadzirwa hachiwanikwe mumucheka wekupfeka wezhizha, wakagadzirwa nemakemikari fiber zvinhu, ndiro vhiri rezvinhu zvakagadzirwa. Chiffon jira kuunyana-kusagadzikana kwakakwana, uye wepamusoro muviri une yakashongedzwa, yakasikwa pendende, inotonhorera uye inozorodza kunzwa, maitiro ekupfeka kuti akanaka sei-anotaridzika.
Asi chiffon machira mune yekugadzira maitiro akapatsanurwa kuita mhando yepamusoro uye yakaderera, sarudzo yekuvimba paruoko kuti ubate, kuona nemaziso ako, usasarudze zvakaipa kuti uchengetedze mari, unofanirwa kutenga mhando. Akashongedzwa machira e-chiffon akapfeka pamuviri achanzwa ziya rakazara kuti gara mukati meganda, rakanyanya kuwanda, machira epamusoro echiffon haazove nedambudziko rakadai.
2. Fibhi inovandudzwa
Iyo yakagadziriswa fiber yakafemerwa nesirikworm kutenderera, ichishandisa zvakasikwa zvinhu senge mbishi zvinhu, makemikari kugadzirisa mune yakanyatsogadziriswa mhinduro, uyezve kutenderera kugadzira kugadzira machira fiber. Iine yakanakisa hunyoro hwekumwa uye mweya kubvumidzwa, zviri nharo kuti ndiyo yakakodzera kwazvo chemakemikari fiber yezhizha uye haina kunamira zvachose.
Synthetic fiber is pure chemakemikari fiber, inozivikanwawo se polyester, inova ndiyo jira rakajairika mune zvipfeko zvezhizha. Vanhu vane kurwara kweganda vanogona kunzwa kuti kupfeka ichi chinhu kunokonzeresa kusagadzikana kweganda. Muchokwadi, mazhinji eazvino polyester tambo anoshanda uye anotonyanya kugadzikana kupfuura donje. Zvimwe zvipfeko zveUniqlo zvakare ZVINOSHANDISA polyester fibers, saka hapana chikonzero chekushushikana nezve allergies.
Paunenge uchitenga mbatya muzhizha, kunze kwekufunga nezvechitaera, zvakakosha kuti uzive kusarudza zvinhu, izvo zvakanaka uye zvakasununguka kupfeka. Mushure mekuverenga chinyorwa ichi, ndinotenda unofanira kunge uine pasi pemoyo pakusarudza mbatya, hauzosarudze zvisizvo.